नेपाल-भारत सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठक सम्पन्न, के के भए सहमति ? - NepaliEkta
नेपाल-भारत सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठक सम्पन्न, के के भए सहमति ?
1404 जनाले पढ्नु भयो ।
काठमाडौं । नेपाल भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रुप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न दुई देश सहमत भएका छन् । नेपालले राखेको सो प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको र यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नसमेत सहमत भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल–भारतबीच पारवहन र अनाधिकृृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको आज सम्पन्न भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएको बैठकमा सो सहमति भएको हो । सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले गर्नुभएको थियो ।
यस्तै २०२० डिसेम्बर ३ र ४ मा भएको नेपाल भारत अन्तर सरकारी उपसमितिमा सहमति भएका पूर्वाधार, पारवहन, व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई समितिले ग्रहण गर्ने कुरामा दुवै मुलुकका सचिव सहमत हुँदै दुवै पक्षले एक अर्कालाई सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा वार्ता सम्पन्न भएकामा धन्यवाद दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
← राजतन्त्रबाट जनताको मुक्ति हुन्छ भनेर चिताउनै हुन्न : केसी
सरकारको गलत कार्यशैलीका कारण प्रतिगामी शक्ति सक्रिय : राजमो →